Shirweyne diirada lagu saarayo famanka diinta Islaamka iyo bulshada oo maanta Muqdisho ka furmay – Radio Daljir
Shirweyne diirada lagu saarayo famanka diinta Islaamka iyo bulshada oo maanta Muqdisho ka furmay
Seteembar 7, 2013 2:45 b 0
Muqdisho, September 7, 2013 – Gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, waxaa maanta ka furmay Shir balaaran oo looga hadlayo fahamka qaldan diinta Islaamka, waxaa shirkaas ka qeyb-galaya culimo waa weyn oo Soomaaliyeed oo isaga kala yimi dalka iyo debeda.
?Wasaarada arrimaha gudaha ayaa horey u shaacisay shirkan in uu ka furmayo Muqdisho horaanta bisha September ee aynu ku jirno, waxaa uu shirkaan socon doonaa muddo shan maalmood iyadoo culimada la isku waafajin doono, sidii loo sixi lahaa fikirka qaldan ee dadka qaarkiis ay diinta u qaateen.
Qoddobka ugu weyn ee shirka looga doodayo mudada shanta maalmood ah ee uu socdo ayaa lagu sheegay sidii loo toosin lahaa fahamka qaldan ee loo adeegsanayo diinta Islaamka, iyadoo diirada la saarayo sidii loo sixi lahaa arrintaas.
Xubin ka tirsan qaban-qaabiyaasha shirka ayaa yiri ?Waxaa jira dad si qaldan u fahmay diinta Islaamka, Mimbarka ama Masaajidka ayaa xataa laga raadinayaa qofka gaalka ah, Bulshada ayey arintaas ku keentay dhibaato dhinaca fahamka diinta ah, waana taas midda aan doonayno inaan tashwiishka ka bixinno.?
Culimo badan oo Soomaaliyeed ayaa la laalyey wixii ka dambeeyey sanadkii 2006-dii, wakhtigaas oo ay dalka ka dhasheen Maxkamadihii Islaamiga, arrintaas ayaa inta badan loo aneeyaa kala duwanaasho dhanka fahamka ah oo u dhexeya culimada Soomaaliyeed iyo urur diimeedyada dalka.
Ethopia oo balan-qaaday heshiis ay dhex-dhigayso Puntland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya